ဒဏ္ဍာရီ (အင်္ဂလိပ်: myth) သည် ရိုးရာအစဉ်လာယုံကြည်မှု အမျိုးအစားဖြစ်၍ ပြောရိုးစဉ်ဆက်ရှိသော ဇာတ်လမ်းများ (သို့) ပုံပြင်များပါဝင်သည်။ အခြေတကျတည်ရှိပြီးဖြစ်သော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ (သို့) ဇာစ်မြစ် ဒဏ္ဍာရီများကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၌ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍအဖြစ် ပါဝင်သည်။ ဒဏ္ဍာရီများတွင်ပါဝင်သော ဇာတ်ကောင်များမှာ နတ်များ (gods) ၊ နတ်နှင့်လူ ပေါင်းဖက်မှုမှ ဆင်းသက်လာကြသော နတ်လူများ (demigod - နတ်တစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်း) (သို့) လူစွမ်းအားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ရံဖန်ရံခါ၌ တစ်စုံတစ်ဦးသည် တစ်ခုခု၊ တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်များပင်ဖြစ်လင့်ကစား ပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားကြသော လူသားများနှင့်ပတ်သက်သော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို ဒဏ္ဍာရီနှင့်မတူသော ရာဇဝင်ပုံပြင် (legend) များထဲ့သို့ ထည့်သွင်းကြသည်။
ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းလေ့လာမှုများသည် ခေတ်ဟောင်းသမိုင်းရာဇဝင်များ၌ စတင်ခဲ့ကြသည်။ ယူဟီးမရ(စ်) (Euhemerus) ၊ ပလေးတိုး၊ ဆဲလ်လ(စ်)ရှပ်စ် (Sallustius) တို့၏ ဂရိဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြိင်ဘက် အမျိုးအစားများကို အေဒီသုံးရာစုနှစ်ခန့်ကပေါ်ထွန်းခဲ့သော ပလေးတိုးဝါဒပညာရှင်လက်သစ်များက ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး အေဒီ ၁၄-၁၆ရာစုခေတ် ဒဏ္ဍာရီရေးသားပြုစုသူများက ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဒဏ္ဍာရီလေ့လာမှုကို မနုဿဗေဒ၊ စိတ်ပညာ၊ ဝေါဟာရဗေဒ နှင့် ရိုးရာစဉ်ဆက်ပုံပြင်လေ့လာမှုအပါအဝင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အမျိုးမျိုး၌ လေ့လာကြသည်။ မစ်သောလာဂျီ (mythology) ဝေါဟာရကို ဒဏ္ဍာရီလေ့လာခြင်း (သို့) ဒဏ္ဍာရီထုထည်ကြီးများမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို လေ့လာခြင်းဟု သုံးနှုန်းကြသည်။ ထိုသို့ ဒဏ္ဍာရီကြီးများအား ပညာရပ်ပိုင်းနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်ဒဏ္ဍာရီလေ့လာခြင်း (comparative mythology)အဖြစ်သိရှိကြသည်။
Myth ဆိုသည့် ဒဏ္ဍာရီ
သို့သော်လည်း တစ်ဖက်တွင် ဒဏ္ဍာရီ နှင့် အခြားရိုးရာစဉ်ဆက်ပုံပြင်များ၏ အမျိုးအစားပုံစံတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နယ်ပယ်တူညီမှုရှိနိုင်သော်လည်း ဒဏ္ဍာရီသည် သမိုင်စဉ်ဆက်လက်ခံခဲ့သော ရာဇဝင်ပုံပြင်(legend) နှင့် ရိုးရာပုံပြင်များ (folktale) အမျိုးအစားများနှင့် မတူဘဲကွဲပြားကြသည်ဟု မကြာခဏဆိုသလိုယူဆတွေးထင်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဤနှစ်ခုကို မြင့်မြတ်သော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များဟူ၍ တွေးမြင်ယူဆခြင်းမရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ အချို့သော ရိုးရာပုံပြင်အမျိုးစားများ ဥပမာအနေဖြင့် နတ်သား နတ်သမီးပုံပြင်များ(fairy stories)အား မည်သူမျှမှန်ကန်သည်ဟု မယူဆကြပါ။ ဤသို့ဖြင့် ထိုသို့သော ပုံပြင်များကို ဒဏ္ဍာရီနှင့် ကွာဝေးစွာရှုမြင်ယူဆနိုင်ကြသည်။  အများအားဖြင့် ဒဏ္ဍာရီ၌ အဓိကဇာတ်ကောင်များသည် နတ်ဘုရား၊ နတ်လူများ သို့ စွမ်းအားရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပြီး ရာဇဝင်ပုံပြင်များက လူသားများကို အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ခင်းကျင်းပုံဖော်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အစ်လိယ(ဒ်)ကဗျာရှည် (Iliad)၊ အော့ဒစ်ဆီကဗျာရှည် (Odyssey)၊ အစ်နီးယစ်ဒ်ကဗျာရှည် (Aeneid) တို့တွင်ကဲ့သို့ များစွာသော ချွင်းချက်များ၊ ပေါင်းစပ်မှုများ တည်ရှိနေကြသည်။ ထို့အပြင် ယဉ်ကျေးမှုများအကြား ပုံပြင်များ ပျံ့နှံ့လာသောအခါ (သို့) ယုံကြည်မှုများပြောင်းလဲသွားသည့်အခါ ဒဏ္ဍာရီများကို ရိုးရာစဉ်ဆက်ပုံပြင်များအဖြစ် ယူဆလာကြကာ ထိုပုံပြင်များထဲရှိ တန်ခိုးစွမ်းအားရှိဇာတ်ကောင်များကို လူသားများ၊ လူနှင့်တူသောပုဂ္ဂိုလ်များ ဥပမာ... လူထွားကြီးများ (သို့) လူ့ဘီလူးကြီးများ (giants) ၊ အက်လ်ဖ်များ (elves) ၊ နတ်သူငယ်ကလေးများ (faerie) အဖြစ်ပြန်လည်ပုံဖော်တင်ဆက်ကြသည်။  ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် သမိုင်းနှင့် စာပေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများသည် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော အရည်အသွေးများကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ရယူကြသည်။ ဥပမာ ဗြိတိန်အလယ်ခေတ်စာပေ (Matter of Britain) ဖြစ်သော အားသာဘုရင် နှင့် ဘုရင့်စားပွဲဝိုင်းအကြောင်းအရာ စသည်တို့နှင့် ပြင်သစ်စာပေ ဒဏ္ဍာရီကြောင်းရာများသည် ၅-၈ရာစုများမှ သမိုင်းဝင်အဖြစ်ပျက်များကို ခပ်လှမ်းလှမ်းသဘော ရယူထားဟန်တူသည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ဒဏ္ဍာရီပုံစံများဖြစ်လာခဲ့ကြ၏။
အရပ်သုံးစကားအဖြစ် ဒဏ္ဍာရီ ဟူသော စကားလုံးကို အချက်လက်ပိုင်းအခြေခံအကြောင်းအရင်းမရှိသော လူအများစွဲမြဲလက်ခံထားကြသည့် ယုံကြည်မှု (သို့) မမှန်ကန်သော ဇာတ်လမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲကြသည်။ ဤအသုံးအနှုန်းသည် အခြားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီနှင့် ယုံကြည်မှုများကို မမှန်ကန်ဟု တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာကာ ရံခါ၌ ဤအသုံးအနှုန်းသည် အထင်သေးရှုတ်ချသည့်သဘောဆောင်လျှက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရိုးရာပုံပြင်လေ့လာသူများနှင့် တက္ကသိုလ်ပညာနယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များက မနုဿဗေဒကဲ့သို့သော ဆီလျှော်ရာနယ်ပယ်များတွင် သုံးနှုန်းကြသောအခါ ဤဝေါဟာရ၌ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်တစ်ခုသည် မှန်ကန်သည် (သို့) မမှန်ကန်ပါဟူ၍ သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုမှုနောက်ဆက်တွဲအဓိပ္ပာယ်မပါရှိချေ။
Mythology ဆိုသည့် ဒဏ္ဍာရီ
လက်ရှိအသုံးပြုမှု၌ မစ်သောလာဂျီ (mythology) ဝေါဟာရသည် လူ့အဖွဲ့တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ စုစည်းရွေးချယ်ထားသော ဒဏ္ဍာရီများကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ထိုသို့သော ဒဏ္ဍာရီများအားလေ့လာခြင်းဟူ၍လည်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ဂရိဒဏ္ဍာရီ၊ ရောမဒဏ္ဍာရီ နှင့် ဟစ်တိုင်း ဒဏ္ဍာရီ (Hittite) တို့အားလုံးသည် ထိုလူ့အဖွဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများကြား ပြန်လည်ပြောဆိုကြသော ဒဏ္ဍာရီထုထည်ကြီးတစ်ရပ်ကို ဖော်ပြ၏။ ရိုးရာပြောဆိုပုံပြင်လေ့လာသူ အလန် ဒန့်စ် (Alan Dundes) က ကမ္ဘာလောကကြီးနှင့် လူ့လောကတစ်ရပ် ယနေ့ခေတ်အခြေအနေသို့ မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာခဲ့သည်ကိုရှင်းလင်းပြသသော အလေးအမြတ်ထားအပ်သည့်(မြင့်မြတ်သည့်) ဇာတ်လမ်းပုံပြင်(sacred narrative) များကို ဒဏ္ဍာရီဟူ၍ ဖွင့်ဆိုသည်။ ဒန့်စ် ကပင်ဆက်လက်၍ မြင့်မြတ်သည့်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းရာ(sacred narrative) များသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လူမှုရေးရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများ၊ စံစနစ်များကို တိတိကျကျဖော်ပြထားသည်၊ ဩကာသလောက၏ ရှုထောင့်အမြင်များကို ရှင်းလင်းပြသသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေခံကျသော လောကအမြင်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် အကျိုးရှိသင့်တော်သည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို မြင့်မြတ်သည့်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းရာ ဟုအမျိုးအစားခွဲခြားခဲ့သည်။  မနုဿဗေဒပညာရှင် ဘရုစ် လင်ကန် (Bruce Lincoln) က ဒဏ္ဍာရီသည် ဇာတ်လမ်းသဏ္ဌာန်ရှိသော အတွေးအမြင်စနစ်ဟု ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်သည်။
mythography ဆိုသည့် ဒဏ္ဍာရီ
ဒဏ္ဍာရီများအား ပြုစုခြင်း (သို့) (အနုပညာဖြင့်တင်ဆက်)ဖော်ပြခြင်းဟူသည့်ဝေါဟာရကို မစ်သောဂရာဖီ (mythography) အဖြစ်အသိများ၍ ဤအသုံးအနှုန်းကို ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေဖြင့် ဒဏ္ဍာရီများအားစုပေါင်းခြင်း (သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသည့်အနေအထားဖြင့် ဒဏ္ဍာရီများအား ယေဘုယျသဘောလေ့လာခြင်း) ဟူ၍သုံးနှုံးနိုင်သည်။ ဂန္ထဝင်ရိုးရာ၌ ဒဏ္ဍာရီ အဓိကပြုစုသူများတွင် အိုဗစ်ဒ် (Ovid) (ဘီစီ ၄၃-၁၇/၁၈)ပါဝင်ပြီး ၎င်း၏ ဒဏ္ဍာရီများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်အထိ ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့လေသည်။ နောက်တစ်ဦးမှာ ၅-၆ရာစုက လက်တင်စာရေးဆရာ ဖေးဘီးယ(စ်) ပလန်းရှီယိတ် ဖာလ်ဂျန်းရှီယက်စ် (Fabius Planciades Fulgentius) ဖြစ်၍ ၎င်း၏ စုစည်းထားသော ဒဏ္ဍာရီများနှင့် ထိုအမျိုးမျိုးထွေပြားသောဒဏ္ဍာရီများမှ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကိုပေးသည်။ အမည်မသိရဘဲ အလယ်ခေတ် ဗာတစ်ကန်မှ(Vatican) ဒဏ္ဍာရီပြုစုသူများသည် အလယ်ခေတ်အကုန်ပိုင်းထိ ဆက်လက်လွှမ်းမိုးခဲ့သည့် ဂန္ထဝင်ဒဏ္ဍာရီ (ဂရိ၊ရောမ) များကိုပြုစုခဲ့ကြ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး ခေတ်ဆန်းချိန်မှ ပညာရှင် Natalis Comes ၏ ဒဏ္ဍာရီ ဆယ်အုပ် (ten-book Mythologiae) သည် ဥရောပခေတ်ဆန်းချိန်နှောင်းပိုင်း ဂန္ထဝင်ဒဏ္ဍာရီအတွက် စံစနစ်ရင်းမြစ်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ အခြားထင်ရှားသော ဒဏ္ဍာရီပြုစုသူများတွင် ၁၃ရာစု၌ အက်ဒါစကားပြေ (Prose Edda) ၏ လက်ရာရှင် စနော်ရီ စတားလဆန် (Snorri Sturluson) ဖြစ်ပြီး ထိုစကားပြေသည် အလယ်ခေတ်များမှစ၍ ယခုထိ အဓိကရှင်သန်လျှက်ရှိသော နော့စ်ဒဏ္ဍာရီ၏ ယေဘုယျဖော်ပြချက် (စစ်ဆေးလေ့လာနိုင်မှု) တစ်ခုဖြစ်သည်။
Mythos ဆိုသည့် ဒဏ္ဍာရီ
Mythopoeia ဆိုသည့် ဒဏ္ဍာရီ
ထိုလက်တင်စကားလုံးကိုပင် အလယ်ခေတ်ပြင်သစ်ဘာသာစကားက mythologie အဖြစ်ချေးယူသုံးစွဲသည်။ ပြင်သစ်မှ လာသည်ဖြစ်စေ လက်တင်မှ လာသည်ဖြစ်စေ "mythology" ဟူသောစကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်က ယူငင်သုံးစွဲ၍ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခု (သို့) ဒဏ္ဍာရီများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှင်းလင်းဖော်ပြမှု၊ တိရိစ္ဆာန်ပုံပြင်များ (fables) အားအနက်ထုတ်ဖော်ခြင်း (သို့) ထိုသို့သောအကြောင်းရာများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြသောစာအုပ် စသည့်အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ခိုင်မာသွာရှိသည့် သက်သေမှာ ထိုစကားလုံးကို (၁၄၂၅)က ဂျွန် လစ်ဒ်ဂိတ်ရေးသည့် ထရွိုင်စာအုပ် ပင်ဖြစ်သည်။
လစ်ဒ်ဂိတ်လက်ထက်မှ ၁၇-၁၈ရာစုအထိ မစ်သောလာဂျီ ကို အမှန်မဟုတ်ဟု နားလည်ထားသော စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ တိရိစ္ဆာန်ပုံပြင်ခိုင်းနှိုင်းမှုတစ်ခု (သို့) ခရစ်ယာန်ပုံဆောင်ဝတ္ထု (သို့) ရိုးရာပုံပြင်များအစု ဟုဆိုလိုရန် သုံးစွဲခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကမ္ဘာအနှံ့၌ တစ်ဆူထက်များသော ဘုရားဝါဒရှိ ယဉ်ကျေးမှုများကြား ရိုးရာပုံပြင်များနှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ရည်ညွှန်းရန် သုံးစွဲလာကြသည်။
ဒဏ္ဍာရီနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုသည် အမျိုးမျိုးသော ယဉ်ကျေးမှုများမှ ဒဏ္ဍာရီများကို စနစ်တကျနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ များစွာသောယဉ်ကျေးမှုများ၏ဒဏ္ဍာရီများတွင် တူညီနေသော အဓိကအခြေခံကြောင်းတရားကို ရှာဖွေရန်လည်း ဤပညာရပ်က ကြိုးပမ်းသည်။ အချို့သောအခြေအနေများ၌ ဒဏ္ဍာရီနှိုင်းယှဉ်လေ့လာသူများသည် တစ်သီးတစ်ခြားဖြစ်နေသော ဒဏ္ဍာရီများကြား တူညီမှုများရှိသည်ဆိုသည့်အချက်ကို အသုံးပြု၍ ထိုဒဏ္ဍာရီများ၌ တူညီသောရင်းမြစ်တစ်ခုရှိကြသည်ဟုလည်း ပြောဆိုကြသည်။ ဤရင်းမြစ်သည် ဒဏ္ဍာရီများကို စေ့ဆော်ကောင်းစေ့ဆော်နိုင်မည် (သို့) ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုချင်းစီ၏ဒဏ္ဍာရီများသို့ ကွဲပြားစေခဲ့သည့် ရှေးအကျဆုံးတူညီသောဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကို ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့နိုင်မည်။
ဒဏ္ဍာရီ-ဓလေ့ထုံးတမ်း သီအိုရီအရ ဒဏ္ဍာရီသည် ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်လျှက်ရှိသည်။ အစွန်းရောက်ဆုံးပုံစံဖြင့် ထိုသီအိုရီသဘောတရားက ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို ရှင်းလင်းပြသခြင်းအလို့ငှာ ဒဏ္ဍာရီများပေါ်ပေါက်လာကြသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ ထိုအခိုင်အမာပြောဆိုမှုကို ပထမဆုံးတင်ပြသည့်သူမှာ ဝီလျမ် ရောဘတ်ဆန် စမစ်သ်ဖြစ်ကာ လူအများသည် ဒဏ္ဍာရီများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် အကြောင်းပြချက်များအတွက် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟု ပြောကြားသည်။ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုအတွက် မူလအကြောင်းကို မေ့သွားကြ၍ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကိုတီထွင်ကာ ကျေနပ်စေရန်ဖြေရှင်းကြသည် ပြီးနောက် ထိုဒဏ္ဍာရီတွင်ဖော်ပြထားသည့် အဖြစ်အပျက်များကို ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းက အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်ကြသည်။ ဂျိမ်းစ်ဖရေးဇာက လူသယးများသည် မှော်ဆန်သောဓလေ့ထုံးတမ်းများမှ ယုံကြည်မှုနှင့်အတူ စတင်စွန့်စားလုပ်ကိုင်ကြ၍ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုမှော်ဆန်မှုကို အယုံအကြည်ပျက်ယွင်းကြကာ နတ်ဘုရားများအ​ကြောင်းဒဏ္ဍာရီများကို တီထွင်ဖန်ဆင်းကြသည်။ ထိုနတ်ဘုရားများကို ကျေနပ်စေရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် ဘာသာရေးထုံးတမ်းများအဖြစ် ထိုရိုးရာဓလေ့များကို ပြန်လလည်အနက်ထုတ်ဖော်ကြသည်။
သမိုင်းအရ ဒဏ္ဍာရီလေ့လာမှုအတွက် အရေးပါသော ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ကြသူများတွင် ဂန်ဘတ်တီစတာ ဗီးကို (Giambattista Vico)၊ ဖရီးဒရစ်ခ်စ် ဝစ်လ်ဟမ်း ဂျိုးဇက် ရှက်လင် (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling)၊ ရှိလာ(Schiller) ၊ ကားလ်ယွန်း (Carl Jung)၊ ဖရွိက် (Freud)၊ လက်ဗီ-ဘရုဟီလ် (Lévy-Bruhl)၊ နော့သ်ရော့ပ် ဖရိုင်း (Northrop Frye)၊ လက်ဗီ-စထရောက် (Lévi-Strauss)၊ ဆိုဗီယက်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဒဏ္ဍာရီနှင့်ရိုးရာဓလေ့အသိုင်းအဝိုင်း တို့ပါဝင်ကြသည်။(မှတ်ချက် - အသိုင်းအဝိုင်းဆိုရာ၌ ဒဏ္ဍာရီများကို အာရုံစိုက်ကာ တစိုက်မတ်မတ်ရေးသားနေသော စာရေးဆရာပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုဆိုလိုသည်။)
ပလေးတိုးက ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော်(the Republic) ၌ ပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးသောအခါ ကဗျာဟန်ဖြင့်ရေးသားထားသော ဒဏ္ဍာရီများကို လူသိရှင်ကြားရှုတ်ချသည်။ ပညာမတတ်သူများသည် ထိုနတ်ဘုရား၊ သူရဲကောင်းများနှင့်ပတ်သက်သော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို တိုက်ရိုက်အမှန်ဟုယူဆသွားနိုင်သည်ဟူသော အကြောင်းတရားပေါ်တွင် ၎င်းကဝေဖန်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပလေးတိုးသည်လည်း ၎င်း၏အရေးအသားအနှံ့အပြား၌ ဒဏ္ဍာရီများအပေါ် ထပ်တလဲလဲ ညွှန်းဆိုမှုများပြုခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်ပလေးတိုးဝါဒ(Middle Platonism)၊ ခေတ်သစ်ပလေးတိုးဝါဒ(neoplatonism) ဟုခေါ်တွင်သော သိသာသောခေတ်များတွင် ထိုပလေးတိုးဝါဒဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခဲ့သဖြင့် ပလူးတာ့ခ် (Plutarch) ၊ ပေါဖစ်ရီ (Porphyry) ၊ အိုလန်းပီယာဒေါရပ်စ် (Olympiodorus) ၊ ဒမဲရှပ်စ် (Damascius) ကဲ့သို့သော စာရေးဆရာများက ရိုးရာဒဏ္ဍာရီ၊ အောဖစ်(Orphic) ဒဏ္ဍာရီများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသော အနက်ထုတ်ဖော်ပြန်ဆိုခြင်းများကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ ရေးသားခဲ့ကြသည်။
ဘားတလိုမယ်ယို ဒီ ဂျိုးဗန်၏ သရုပ်ဖော်ပုံရှည်တွင် အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်စပ်ဖော်ပြထား၏။ဝဲဘက်အပေါ်တွင် ဂျူပီတာနတ်မင်းသည် တိမ်တိုက်မှ ပေါ်ထွက်လာပြီး မာကျူရီနတ်မင်းအား သစ်ပင် (သို့) မြစ်စောင့်နတ်သမီး အိုင်းယို (Io)ကိုကယ်ဆယ်စေရန်ခိုင်းခြင်း။
(၁၉)ရာစု ပညာရှင်များ၏ ဉာဏပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်အခြေအနေများကို ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်သော ပေါ်ထွက်လာသည့်စိတ်ကူးများက နက်နဲစွာပုံဖော်ပုံသွင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုစိတ်ကူးအကြံများ၌ပါရှိသည်မှာ များစွာသော ဥရောပအာရှဘာသာစကားများ၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်နောက်တစ်ခုမှာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ အားလုံးသည် ယခုပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သော ရှေးဦးဘာသာစကားတစ်ခု အိန္ဒိယ-ဥရောပဘာသာစကား (Indo-European language) မှဆင်းသက်လာခဲ့ကြ၍ ထိုဘာသာစကားကြီးကို ကွဲထွက်လာခဲ့ကြသော ဆိုင်ရာဘာသာစကားများအားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းမှတစ်ဆင့် ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်ဟူသော အသိအမှတ်ပြုခြင်းပါဝင်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုများသည် တူညီသောမူကွဲများအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာနိုင်ကောင်းလာနိုင်သည် ဆိုသည့်စိတ်ကူးကိုလည်း ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၉ရာစု သီအိုရီများက ဒဏ္ဍာရီကို ကျရှုံးခဲ့ရသော (သို့) ပကတိဖြစ်သော ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအတွေးများအဖြစ် ကန့်သတ်ထားကာ တစ်ဖြောင့်တည်းလူမှုရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာမှု သီအိုရီ (unilineal) ကန့်သတ်ဘောင်အတွင်း ခေတ်ပေါ်သိပ္ပံပညာ၏ ရှေးဦးကျသောပြိုင်ဘက်အဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုကြသည်။ ထိုကန့်သတ်ဘောင်က စဉ်းစားဖော်ပြသည်မှာ လူသားများ၏ ယဉ်ကျေးမှုများသည် မတူညီသောနှုန်းများဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခြင်း၏ အဖြောင့်လမ်းကြောင်း၌ သွားလာကြသည်။
၁၉ရာစုနှောင်းပိုင်း၏ လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာသီအိုရီတစ်ခုမှာ သဘာဝတရားဒဏ္ဍာရီ (nature mythology) ဖြစ်ပြီး အဦးဆုံး ထောက်ခံသူများမှာ မက်ခ်စ် မွတ်လာ၊ အက်ဒ်ဝပ် ဘားနက် တိုင်လာ (Edward Burnett Tylor)တို့ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသီအိုရီက ရှေးဦးသူတို့သည် သဘာဝကမ္ဘာ(ဩကာသလောက) နှင့် မူလအားဖြင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်ကြသည် ဟုတင်ပြကြ၍ ဝိတိုရိယခေတ် ဥရောပသားများသဘောမခွေ့သည့် ဒဏ္ဍာရီများ(ဥပမာ ကာမဆက်ဆံခြင်း၊ သွေးသားရင်းချာ ကာမဆက်ယှက်မှု(incest)၊ လူသားစားခြင်း(cannibalism) ..) စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးရေးတွင် မျိုးအောင်ကြီးထွားခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဖြစ်စဉ်များအတွက် ခိုင်းနှိုင်းတင်စားချက်များအဖြစ် အနက်သဘောထုတ်ကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဆန်သည့် သဘာဝဥပဒေများ (သဘာဝတရား၊ လူမှုရေးရာအခြေအနေစသည်)ကို မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် ရှေးဦးလူသားများသည် လှုပ်ရှားမှုမရှိသောသက်မဲ့အရာများကို သက်ရှိများနှင့် တင်စာခြင်းဖြင့် သဘာဝဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်များကို ရှင်းပြရန်ကြိုးစားခဲ့ကြ၏။ ထိုမှ နတ်ဘုရားကိုးကွယ်မှုဝါဒ (animism) ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသည်။ တိုင်လာ အရဆိုလျှင် လူ့အတွေးတို့သည် ဒဏ္ဍာရီလာစိတ်ကူးများမှစတင်၍ တဖြည်ဖြည်းဖြည်းခြင်း သိပ္ပံနည်းကျ စိတ်ကူးများအဖြစ် အဆင့်ပေါင်းများစွာကျော်ဖြတ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြသည်။ မွတ်လာက ဒဏ္ဍာရီသည် ဘာသာစကားမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ကာ ဒဏ္ဍာရီကို ဘာသာစကား၏ရောဂါ ဟူ၍ပင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီများသည် ရှေးခေတ်ဘာသာစကားများ၌ စိတ္တဇနာမ်များ၊ ကျား/မ လိင် (ဝေါဟာရ)မရှိသဖြင့် ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘာသာစကားများ၌ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ နတ်ဘုရားတင်စားခိုင်းနှုင်းမှုကို အဆုံး၌ စာပေအရမှတ်ယူခဲ့ကြသဖြင့် သဘာဝဖြစ်စဉ်များသည် သက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) နတ်ဘုရားများ ဖြစ်ပါသည်ဆိုသောစိတ်ကူးကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉ရာစုပညာရှင်တို့သာမက ပညာရှင်အားလုံးက ဤစိတ်ကူးအားလက်ခံသည်တော့မဟုတ်ပါ။ လက်ဗီ-ဘရုဟီလ် ရှေးဦးကာလစိတ်နေသဘောထားမှာ လူ့စိတ်မနော၏ အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ကာ သမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာခြင်း၌ အဆင့်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။  မကြာသေးမီကပြုလုပ်သော ပညာရပ်ပိုင်းလေ့လာမှုတစ်ခုက ဒဏ္ဍာရီများကိုလည်ပတ်စေသည့်လူများကြား၌ သဘာဝတရားဒဏ္ဍာရီ အနက်ဖော်ထုတ်ပြန်ဆိုခြင်းအတွက် အခြေခံကြသောသက်သေအထောက်အထားကင်းမဲ့သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုရင်း ထိုလေ့လာမှုကလည်း ထိုနည်းတူစွာပင် သဘာဝတရားဒဏ္ဍာရီ၏ အဓိကအရေးပါသော စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ပစ်ပယ်သည်။
(၂၀)ရာစုအလယ်တွင် လက်ဗီ-စထရောက် ဦးဆောင်ခဲ့သော ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သည့် structuralist theory (လူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ အပြုအမူ၊သိမြင်နားလည်မှု၊အတွေ့အကြုံစသည်တို့ကို သုံးသပ်စိစစ် အနက်ထုတ်ဖော်လေ့လာသောပညာရပ်) ၏အရေးပါသောဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ရပ်ရှိလာခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီများသည် စိတ်၌ဖြစ်လေ့ရှိသောပုံစံများကို ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပြီး ထိုပုံစံများကို မသိစိတ်ခံစားချက်၊ စေ့ဆော်ချက်များထက် ဆန့်ကျင်ဘက်စုံတွဲများ (အကောင်း/အဆိုး၊ ကြင်နာ/ရက်စက်...) အဖြစ်ပို၍ အနက်ယူပြန်ဆိုခဲ့သည်ဟု စထရောက်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်အတွင်း မဲလင်းနော့ဖ်စကီ (Bronislaw Malinowski)က အရှိကမ္ဘာတွင် ဒဏ္ဍာရီတို့၏လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ်အလေးထားသော ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သည့်စိစစ်လေ့လာမှုများကို တိုးတက်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ဇာစ်မြစ်ဒဏ္ဍာရီကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံစနစ်ပုံစံများအတွက် ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ဆိုသော စိတ်ကူးကို ဆက်စပ်တင်ပြခဲ့သည်။ ဆက်နွယ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုလေ့လာခြင်းခေတ် (Structuralist Era) (အကြမ်းဖျဉ်း ၁၉၆၀ မှ ၁၉၈၀နှစ်များ) ပြီးနောက် အဓိကကျသော မနုဿဗေဒ၊ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုလေ့လာမှုများက ဒဏ္ဍာရီကို ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း၊ အတွေးမြင်စနစ်များကဲ့သို့ အနက်ထုတ်ဖော်ပြန်ဆိုနိုင်သော၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော၊ လေ့လာနိုင်သော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် အလွန်အမင်းဆက်ဆံကိုင်တွယ်ခဲ့ကြသည်။ အခြားနည်းအားဖြင့် ဒဏ္ဍာရီဆိုသည်မှာ အာဏာ၊ နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုများ၊ နိုင်ငံရေး-စီးပွားရေး စိတ်ပါဝင်စားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကို နားလည်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း ပုံစံတစ်ရပ်ဖြစ်၏။ ဤချဉ်းကပ်လေ့လာမှုများသည် ဂျိုးဇက် ကမ်းဘဲလ် (Joseph Campbell) နှင့် အီးလီယိတ် (Eliade) တို့လို လေ့လာချဉ်းကပ်မှုပုံစံများနှင့် ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိသည်။ ထိုနှစ်ဦးတို့က ဒဏ္ဍာရီသည် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များထက်ပိုကာ ဒဏ္ဍာရီ၌ မြင့်မြတ်သည့် အဓိပ္ပာယ်များနှင့်ပတ်သက်သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်ပုံစံတစ်ချို့ ပါဝင်သည်ဟူသော အယူအဆကို စွဲကိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဒဏ္ဍာရီကို ကွဲပြားသောလူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်များမှ သမိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍လေ့လာခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းသည် အချက်လက်တိကျမှန်ကန်ကာ ဒဏ္ဍာရီသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားရှိသည်ဟူသောအယူအဆမျိုးဖြင့် ထိုသမိုင်းပညာရပ်ရော ဒဏ္ဍာရီပါ ကွာခြားလှသည်မဟုတ်ဟူသည့်ယူဆချက်ကို ထိုလေ့လာမှုများကမျှဝေလက်ခံကြသည်။
(၂၀)ရာစု၌ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုများတွင် လောကီသဘောတရား (ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုမပါရှိခြင်း) လျှင်လျှင်မြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။ ဤသည်ကပင် အနောက်တိုင်းပညာရှင်များကို အေဘရာဟမ်းမစ်ဘာသာတရားများ၌ပါရှိသော ဇာတ်လမ်းများအား စိစစ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားစေချင်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးလေ့လာသူဖြစ်သည့် ဘွတ်လ်မန် (Rudolf Bultmann)က ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်အယူသည် ဒဏ္ဍာရီဆန်သည့်အရည်အသွေများဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။ အခြားဘာသာရေးပညာရှင်များက အေဘရာဟမ်းမစ်ဘာသာတရားများပါဇာတ်လမ်းများ၏ ဒဏ္ဍာရီဆန်သောအဆင့်အတန်းသည် ၎င်းတို့အရေးပါမှု၏သဘာဝကျသောပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်ဆိုသောအယူအဆကို စွဲကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးပညာရှင် ဟိုင်ယာစ် (Conrad Hyers) ကဤသို့ရေးသားခဲ့၏။
... ယနေ့ခေတ်ဒဏ္ဍာရီတွင် အကောင်းမဆန်သော အနက်အဓိပ္ပာယ်များရှိလာခဲ့ရသည်။ ဤသည်မှာ ဘာသာတရား(စာသား) ၌ပါရှိသော ဒဏ္ဍာရီ၏အနက်အဓိပ္ပာယ်နှင့် ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိသည်။ ဘာသာရေးကျမ်းစာတွင် ဒဏ္ဍာရီများသည် အန္တိမအမှန်တရား၏ဇာတ်လမ်းပုံဆောင် ပို့ဆောင်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ထိုဇာတ်လမ်းဒဏ္ဍာရီများဖြင့် လူအများသည် ၎င်းတို့ဘဝအား လည်ပတ်လှုပ်ရှား အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့ဘဝ၌ ရည်ရွယ်ချက်၊ တန်ဖိုး တို့ကိုလည်းတွေ့ရှိကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီများက တစ်စုံတစ်ယောက်အား ဖြစ်တည်ခြင်း၊ စွမ်းအား၊ အမှန်တရားတို့၏ အခြေခံကြသောအရင်းမြစ်များဖြစ်သည့် မြင့်မြတ်သော အရှိတရားများ(လက်တွေ့ဘဝ)နှင့် ထိတွေ့စေသည်။ ဒဏ္ဍာရီများကို အမှား၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်မြင်ရုံသာမက လူတစ်စုတစ်ဖွဲ့တို့၏ ပုံမှန်နေ့စဉ် ဟိုဟိုသည်သည်ပြောဆိုကြသော၊ ဖျော်ဖြေနိုင်ရန်အလို့ငှာပြောဆိုကြသော ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များနှင့်မတူကွဲပြားသည်ဟူ၍လည်း ရှုမြင်ကြသည်။ ဒဏ္ဍာရီများသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုများက မည်သည်ကြောင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အဖြေကိုလည်းပေးတတ်၏။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုသည် လျှို့ဝှက်ပုန်းကွယ်သည့် သဘောရှိသဖြင့် ထိုအချက်များကို ဇာတ်လမ်းပုံပြင်နှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းတို့မှတစ်ဆင့် ဖော်ထုတ်ပြသပေးသည်။ ဒဏ္ဍာရီများသည် သာမန်အမှန်တရားကိုသာမက အစွန်းဆုံသောအမှန်တရား(ပရမတ္ထသစ္စာ) နှင့်ပါဆက်နွယ်ပတ်သက်လျှက်ရှိသည်။
ဒဏ္ဍာရီကို အစဉ်အဆက်သဘောအနေအထားအရ နှုတ်ဖြင့်သာ သေးကွေးသည့်ပုံစံဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ခဲ့ကြသော်လည်း ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများက ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများကို ဒဏ္ဍာရီအား ကြီးမားများပြားသည့်ပရိတ်သတ်ဆီသို့ ရုပ်ရှင်မှတစ်ဆင့် သယ်ဆောင်ခွင့်ပြုနိုင်စေခဲ့သည်။ ကားလ်ဂျွန်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီများတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် (သို့) ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်၏ ပန်းတိုင်၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ ရည်မှန်းချက်၊ အိပ်မက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖော်ပြချက်များပါရှိသည်။
ခေတ်ပေါ်အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်ပြောဆိုခြင်း၏အခြေခံသည် ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သောဓလေ့ရိုးရာ၌ အမြစ်တွယ်၍ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ များစွာသော ခေတ်ပြိုင်ရုပ်ရှင်များသည်ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီများအပေါ်တွင် အခြေခံလျှက် ဇာတ်လမ်းများတည်ဆောက်ကြသည်။ ဝေါ့လ်ဒစ်စနီကုမ္ပဏီသည် ရိုးရာကလေးဘဝအသားပေးဒဏ္ဍာရီများကို ပြန်လည်တီထွင်ခြင်း၌ ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာသူပညာရှင်များအကြား ကျော်ကြားလှသည်။ အခြားသောရုပ်ရှင်များသည် ဒစ်စနီရိုးရာဇာတ်လမ်းပုံပြင်များကဲ့သို့ မထင်ရှားမသိသာသော်လည်း ထိုများပြားသောရုပ်ရှင်များ၏ ဇာတ်လမ်းများသည်လည်း ဒဏ္ဍာရီအပေါ် အကြမ်းဖျဉ်းတည်ဆောက်မှု၌ အခြေခံကြပါသည်။ ဒဏ္ဍာရီဟန်ပုံစံများ ဥပမာအားဖြင့် နည်းပညာ၏ဖျက်ဆီးမှုကို သတိပေးသောပုံပြင်များ၊ နတ်ဘုရားများကြားက တိုက်ပွဲများ၊ ဖန်တီးခြင်းပုံပြင်များ စသည်တို့သည် များမကြာခဏဆိုသလို အဓိကရုပ်ရှင်များ၏ အကြောင်းအရာများဖြစ်ကြ၏။ထိုရုပ်ရှင်များကို cyberpunk ခေါ် သိပ္ပံခေတ်လွန်၊ အက်ရှင် ရုပ်ရှင်များ၊ စိတ်ကူးယဉ်၊ ဒရာမာ နှင့် ကမ္ဘာပျက်ခြင်းအကြောင်းဖော်ပြသောဇာတ်လမ်း စသည်တို့၏တင်ဆက်မှုဟန် အသွင်အပြင်အောက်၌ ဖန်တီးကြသည်။
(၂၁)ရာစု ရုပ်ရှင်များဖြစ်သော တိုက်တန်များတိုက်ပွဲ (Clash of the Titans - 2010 film)၊ နတ်မျိုးနွယ်များ (Immortals - 2011 film) နှင့် သော်နတ်ဘုရား (Thor) တို့သည် ခေတ်သစ်ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကို မူဘောင်ထားကာ ရိုးရာဒဏ္ဍာရီများကို ဖော်ထုတ်တူးဆွထားသော ခေတ်သစ်လမ်းကြောင်းရုပ်ရှင်များဖြစ်ကြသည်။ စာရေးဆရာများသည် ၎င်းတို့စာအုပ်များအတွက် ဒဏ္ဍာရီကိုအသုံးချလျှက်ရှိရာ Rick Riordan ၏ ပါစီဂျက်ဆန်နှင့်အိုလင်ပီယန်နတ်ဘုရားများ (Percy Jackson and the Olympians) ဇာတ်လမ်းတွဲသည် ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၌အခြေခံကာ ဂရိနတ်ဘုရား (၁၂)ပါး ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသည်။
Bascom 1965, p. 9.
"myths", A Dictionary of English Folklore
Doniger O'Flaherty၊ Wendy (1975)။ Hindu Myths။ Penguin။ p. 19။ ISBN 978-0-14-044306-6။ I think it can be well argued asamatter of principle that, just as 'biography is about chaps', so mythology is about gods.
Eliade 1998, p. 23.
Pettazzoni 1984, p. 102.
Dundes 1984, p. 1.
Eliade 1998, p. 6.
Von Franz, M. L. (2017)။ The interpretation of fairy tales: Revised edition။ London: Shambhala Publications။
Honko၊ Lauri (1984)။ "The Problem of Defining Myth"။ in Dundes၊ Alan (ed.)။ Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth။ University of California Press။ p. 49။ Cite uses deprecated parameter |editorlink= (အကူအညီ)
Dundes 1984, p. 147.
Doty 2004, pp. 11–12.
Segal 2015, p. 5.
Kirk 1984, p. 57.
Kirk 1973, p. 74.
Apollodorus 1976, p. 3.
"myth"။ Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (10th ed.)။ Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster, Inc။ 1993။ p. 770။
Salamon၊ Hagar; Goldberg၊ Harvey E. (2012)။ "Myth-Ritual-Symbol"။ in Bendix၊ Regina F.; Hasan-Rokem၊ Galit (eds.)။ A Companion to Folklore။ Wiley-Blackwell။ p. 125။
Bascom 1965, p. 7.
Bascom 1965, pp. 9, 17.
Eliade 1998, pp. 10–11.
Pettazzoni 1984, pp. 99–101.
Kirk 1973, pp. 22, 32.
Kirk 1984, p. 55.
Doty 2004, p. 114.
Bascom 1965, p. 13.
"romance | literature and performance" (in en)၊ Encyclopædia Britannica။
"myth, n., §2" OED Online, Oxford University Press, June 2018, www.oed.com/view/Entry/124670. Accessed 23 August 2018.
Eliade, Myths, Dreams and Mysteries, 1967, pp. 23, 162.
Howells၊ Richard (1999)။ The Myth of the Titanic။ Macmillan။ ISBN 978-0-312-22148-5။
Winzeler, Robert L. (2012) Anthropology and Religion: What We Know, Think, and Question Rowman & Littlefield, pp. 105–106.
"Science as Epic? Can the modern evolutionary cosmology beamythic story for our time?" (March 1998). Science & Spirit9(1). “The word 'myth' is popularly understood to mean idle fancy, fiction, or falsehood; but there is another meaning of the word in academic discourse .... Using the original Greek term mythos is perhapsabetter way to distinguish this more positive and all-encompassing definition of the word.”
Lincoln, Bruce (2006). "An Early Moment in the Discourse of "Terrorism": Reflections onaTale from Marco Polo". Comparative Studies in Society and History 48 (2): 242–259. doi:10.1017/s0010417506000107. “More precisely, mythic discourse deals in master categories that have multiple referents: levels of the cosmos, terrestrial geographies, plant and animal species, logical categories, and the like. Their plots serve to organize the relations among these categories and to justifyahierarchy among them, establishing the rightness (or at least the necessity) ofaworld in which heaven is above earth, the lion the king of beasts, the cooked more pleasing than the raw.”
"mythography, n." OED Online, Oxford University Press, July 2018, https://www.oed.com/view/Entry/124691. Accessed 12 September 2018.
Jane Chance, Medieval Mythography,2vols (Gainesville, 1994–2000).
Oxford English Dictionary, 3rd ed. "mythos, n." Oxford University Press (Oxford), 2003.
"mythopoeia, n." OED Online, Oxford University Press, July 2018. Accessed 12 September 2018.
See Mythopoeia (poem); cf. J. R. R. Tolkien, Tree and Leaf; Mythopoeia; The Homecoming of Beorhtnoth Beorhthelm's Son (London: HarperCollins, 2001) [first published 1964] ISBN 978-0-00-710504-5.
"myth, n.", "mythos, n." OED Online, Oxford University Press, July 2018. Accessed 12 September 2018.
Oxford English Dictionary, 1st ed. "-logy, comb. form". Oxford University Press (Oxford), 1903.
Fulgentius၊ Fabius Planciades (1971)။ Fulgentius the Mythographer။ Ohio State University Press။ ISBN 978-0-8142-0162-6။
Oxford English Dictionary, 3rd ed. "mythology, n." 2003. Accessed 20 Aug 2014.
Lydgate, John. Troyyes Book, Vol. II, ll. 2487. (in Middle English) Reprinted in Henry Bergen's Lydgate's Troy Book, Vol. I, p. 216. Kegan Paul, Trench, Trübner, & Co. (London), 1906. Accessed 20 Aug 2014.
"...I [ Paris ] was ravisched in-to paradys.
"mythology". Online Etymology Dictionary
Browne, Thomas. Pseudodoxia Epidemica: or, Enquiries into Many Received Tenets and Commonly Presumed Truths, Vol. I, Ch. VIII. Edward Dod (London), 1646. Reprinted 1672.
All which [sc. John Mandevil's support of Ctesias's claims] may still be received in some acceptions of morality, and toapregnant invention, may afford commendable mythologie; but inanatural and proper exposition, it containeth impossibilities, and things inconsistent with truth.
Johnson, Samuel. "Mythology" in A Dictionary of the English Language: in which the Words are Deduced from their Originals, and Illustrated in their Different Significations by Examples from the Best Writers to which are PrefixedaHistory of the Language and an English Grammar, p. 1345. W. Strahan (London), 1755.
Johnson, Samuel. A Dictionary of the English Language, p. 1345. W. Strahan (London), 1755. Accessed 20 Aug 2014.
Johnson's Dictionary, for example, has entries for mythology, mythologist, mythologize, mythological, and mythologically 
Shuckford, Samuel. The Creation and Fall of Man. A Supplemental Discourse to the Preface of the First Volume of the Sacred and Profane History of the World Connected, pp. xx–xxi. J. & R. Tonson & S. Draper (London), 1753. Accessed 20 Aug 2014.
"That Mythology came in upon this Alteration of their [Egyptians' Theology, is obviouſly evident: for the mingling the Hiſtory of theſe Men when Mortals, with what came to be aſcribed to them when Gods, would naturally occaſion it. And of this Sort we generally find the Mythoi told of them..."
Coleridge, Samuel Taylor. "On the Prometheus of Æschylus: An Essay, preparatory toaseries of disquisitions respecting the Egyptian, in connection with the sacerdotal, theology, and in contrast with the mysteries of ancient Greece." Royal Society of Literature (London), 18 May 1825. Reprinted in Coleridge၊ Henry Nelson (1836)။ The Literary Remains of Samuel Taylor Coleridge: Shakespeare, with introductory matter on poetry, the drama, and the stage. Notes on Ben Jonson; Beaumont and Fletcher; On the Prometheus of Æschylus [and others။ W. Pickering။ pp. 335–။
"Long before the entire separation of metaphysics from poetry, that is, while yet poesy, in all its several species of verse, music, statuary, &c. continued mythic;—while yet poetry remained the union of the sensuous and the philosophic mind;—the efficient presence of the latter in the synthesis of the two, had manifested itself in the sublime mythus περὶ γενέσεως τοῦ νοῦ ἐν ἀνθρωποῖς concerning the genesis, or birth of the νοῦς or reason in man."
Abraham of Hekel (1651)။ "Historia Arabum(History of the Arabs)"။ Chronicon orientale, nunc primum Latinitate donatum ab Abrahamo Ecchellensi Syro MaronitaeLibano, linguarum Syriacae, ... cui accessit eiusdem Supplementum historiae orientalis (The Oriental Chronicles။eTypographia regia။ pp. 175–။ (in လက်တင်) Translated in paraphrase in Blackwell၊ Thomas (1748)။ "Letter Seventeenth"။ Letters Concerning Mythology။ printed in the year။ pp. 269–။
Anonymous review of Upham၊ Edward (1829)။ The History and Doctrine of Budhism: Popularly Illustrated: with Notices of the Kappooism, Or Demon Worship, and of the Bali, Or Planetary Incantations, of Ceylon။ R. Ackermann။ In the Westminster Review, No. XXIII, Art. III, p. 44. Rob't Heward (London), 1829. Accessed 20 Aug 2014.
"According to the rabbi Moses Ben Maimon, Enos, discoursing on the splendor of the heavenly bodies, insisted that, since God had thus exalted them above the other parts of creation, it was but reasonable that we should praise, extol, and honour them. The consequence of this exhortation, says the rabbi, was the building of temples to the stars, and the establishment of idolatry throughout the world. By the Arabian divines however, the imputation is laid upon the patriarch Abraham; who, they say, on coming out from the dark cave in which he had been brought up, was so astonished at the sight of the stars, that he worshipped Hesperus, the Moon, and the Sun successively as they rose. These two stories are good illustrations of the origin of myths, by means of which, even the most natural sentiment is traced to its cause in the circumstances of fabulous history.
Anderson (2004), p. 61
Wiles (2000), pp. 5–6
Littleton 1973, p. 32.
Eliade 1998, p. 8.
Honko 1984, p. 51.
Eliade 1998, p. 19.
Pattanaik၊ Devdutt (14 September 2015)။ Why I Insist On Calling Myself A Mythologist။ 24 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Bulfinch 2004, p. 194.
Honko 1984, p. 45.
"Euhemerism", The Concise Oxford Dictionary of World Religions
Segal 2015, p. 20.
Bulfinch 2004, p. 195.
Frankfort et al. 2013, p. 4.
Frankfort et al. 2013, p. 15.
Segal 2015, p. 61.
Graf 1996, p. 40.
Meletinsky 2014, pp. 19–20.
Segal 2015, p. 63.
Frazer 1913, p. 711.
Guy Lanoue, Foreword to Meletinsky, p. viii.
Segal 2015, p. 1.
On the Gods and the World, ch. 5, See Collected Writings on the Gods and the World, The Prometheus Trust, Frome, 1995
Perhaps the most extended passage of philosophic interpretation of myth is to be found in the fifth and sixth essays of Proclus’ Commentary on the Republic (to be found in The Works of Plato I, trans. Thomas Taylor, The Prometheus Trust, Frome, 1996); Porphyry’s analysis of the Homeric Cave of the Nymphs is another important work in this area (Select Works of Porphyry, Thomas Taylor The Prometheus Trust, Frome, 1994). See the external links below forafull English translation.
The Myth of Io.။ The Walters Art Museum။
For more information on this panel, please see Zeri catalogue number 64, pp. 100–101
Tom Shippey, 'A Revolution Reconsidered: Mythography and Mythology in the Nineteenth Century', in The Shadow-Walkers: Jacob Grimm’s Mythology of the Monstrous, ed. by Tom Shippey, Medieval and Renaissance Texts and Studies, 291/Arizona Studies in the Middle Ages and the Renaissance, 14 (Tempe, AZ: Arizon Center for Medieval and Renaissance Studies, 2005), pp. 1–28 (esp. pp. 4–13).
Segal 2015, pp. 3–4.
John McKinnell, Meeting the Other in Norse Myth and Legend (Cambridge: Brewer, 2005), pp. 14-15.
Segal 2015, p. 4.
Mâche၊ Francois-Bernard (1992)။ Music, Myth and Nature, or The Dolphins of Arion။ p. 8။ ISBN 978-3-7186-5321-8။
Richard M. Dorson, 'The Eclipse of Solar Mythology', in Myth: A Symposium, ed. by Thomas A. Sebeok (Bloomington: Indiana University Press, 1955), 25–63.
John McKinnell, Meeting the Other in Norse Myth and Legend (Cambridge: Brewer, 2005), pp. 14–15.
Segal 2015, pp. 67–68.
Segal 2015, p. 3.
Segal 2015, p. 113.
Harvey Birenbaum, Myth and Mind (Lanham, MD: University Press of America, 1988), pp. 152–153.
Barthes၊ Roland (1972)။ Mythologies။ Hill and Wang။ ISBN 978-0-09-997220-4။
Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology (New York: Scribner, 1958).
Hyers 1984, p. 107.
E.g. John McKinnell, Both One and Many: Essays on Change and Variety in Late Norse Heathenism, Philologia: saggi, ricerche, edizioniacura bi Teresa Pàroli, 1 (Rome, 1994).
A. K. Ramanujan, "Three Hundred Rāmāyaṇas: Five Examples and Three Thoughts on Translation", in Many Rāmāyaṇas: The Diversity ofaNarrative Tradition in South Asia, ed. by Paula Richman (Berkeley: University of California Press, 1991), pp. 22–48; reprinted in A. K. Ramanujan, The Collected Essays of A. K. Ramanujan (Oxford: Oxford University Press, 2004), pp. 131–60, ISBN 978-0-19-566896-4.
E.g. Ken Dowden, The Uses of Greek Mythology (London: Routledge, 1992).
Ostenson၊ Jonathan (2013)။ Exploring the Boundaries of Narrative: Video Games in the English Classroom။
Singer၊ Irving (2008)။ Cinematic Mythmaking: Philosophy in Film။ MIT Press။ pp. 3–6။
Indick, William (November 18, 2004). "Classical Heroes in Modern Movies: Mythological Patterns of the Superhero". Journal of Media Psychology.
Koven၊ Michael (2003)။ Folklore Studies and Popular Film and Television: A Necessary Critical Survey။ University of Illinois Press။ pp. 176–195။
Corner 1999, pp. 47–59.
Mead၊ Rebecca။ "The Percy Jackson Problem"၊ The New Yorker၊ 2014-10-22။